CHRYSALIDOCARPUS: DARYEELKA GURIGA, SAWIR - DHIRTA GUDAHA
Chrysalidocarpus, waxyaabaha gaarka ah ee daryeelka iyo dhibaatooyinka suurtagalka ah
Chrysalidocarpus - wakiilka ugu caansan ee calaacalaha indhaha, laga bilaabo chryseus Giriiga - dahab iyo karpos - miro.
Asal ahaan ka yimid Madagascar iyo Oceania. Xaalada dabiiciga ah waxay kori kartaa illaa 9 mitir.
Waxaa jira laba nooc oo caleemo indoor ah oo ku saabsan nooca caleemaha - cirrus iyo fan. Waa laan qafiif ah oo isku mid ah oo isku midka ah gacmeed (oo ah luuqad "palm" macnaheedu yahay "timir"). Mid ka mid ah timirta noocaan oo kale ah waa geedka timirta ah. chrysalidocarpus huruud ah ka soo jeeda Areca. Xaaladaha qolka waxay ku koraan qaab baadiyaha leh height of 1.5-2 mitir.
Wakiilka bacriminta waa walaac Chrysalidocarpus ee Madagascar - hal geesi waa caleemaha la uruuriyey meesha ay kudoonayaan ee jirridda ee rucubada.
Xaaladaha qolka, xitaa dhirta timirta ah waa la koray - Hamedorea, Yucca, Hovei, taariikh, cicas.
Chrysalidocarpus aan qabin, dalab weyn.
Cudurka Areca waxaa ku jira 50 nooc.
Ma taqaanaa? In qoyska palm halkaas Nooc keliya oo geedo timir ah u fuushan - duufaan
In Madagascar iyo Comoros, waxaa jira 20 nooc oo ah carpusa chrysalid. Chrysalidocarpus huruud ah iyo Madagascar chrysalidocarpus si fiican u koraan xaaladaha qolka.
Chrysalidocarpus huruud ah
Waa midka ugu habboon deegaanka dabiiciga ah. Laga soo bilaabo Ch. lutescens - chrysalidocarpus lutescensisku midka ah - dipsi hurdi. Iyada oo daryeel caafimaad leh oo timirta ah, chrysalidocarpus waxay kori kartaa 2 illaa 5 afkoda guriga. Waxay noqon doonaan huruud oo leh dhibco yar oo madow. Geedo ayaa lagu ururiyaa hal dhibic oo saldhigga geedka. Mid kasta oo xayawaanka ah ayaa calaamada caleenta dheer la leh ololeyaha, asliga ah ee gaadhaya 60 sentimitir.
Chrysalidocarpus ee Madagascar
Chrysolidocarpus ee Madagascar waxay ka qaadaysaa magaca Ch. Madagascariensis, isku mid ah - Diptis Madagascar. Foosto yar oo foorno ah ayaa hoos u dhacda ayaa lagu tilmaamaa siddooyin iyo dusha sare ee dusha sare leh. Caleemaha waa la dubay, waxay leeyihiin dusha sare. Magaca guud ee guud ayaa loo isticmaalaa - geed caleenta ah.
Isku day inaad sameyso gudaha guriga si kaamil ah, waxaannu korinnaa dhirta qalaad - alokaziya, Strelitzia, dhirta tulip, feijoa, kivano, crossander, Ixora.
Daryeelka geed qoryaha ah ee guriga dhexdiisa ah waxay muujinaysaa hirgelinta xeerarka aasaasiga ah ee aasaasiga ah.
Gobollada guryaha waxay leeyihiin baahi aad u saraysa iftiinka, sidaa darteed meel loogu talagalay waa in ay iftiin fiican. Laakiin xaaladda xayndaabka qadiimiga iyo qoraxda tooska ah ee laga bilaabo 11 illaa 15 saacadood xilliga xagaaga waa mid khasab ah.
Dhirta soo baxda ayaa aad u nugul. Dadka waaweyni way bedelan karaan haddii uu geedku rabo - wuxuu dareemayaa raaxo leh qayb ka mid ah hooska iyo dhinaca woqooyiga.
Waa muhiim! Geedhu waa inay si caadi ah u noqotaa iftiinka dhinacyada kala duwan. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid iskudhaf tufaax ah isla markaana si sax ah u dhig xarunta dhexe ee culeyska.
Wixii raaxada dhirta xilliga jiilaalka waxaad u baahan tahay inaad ku hayso heerkul ah 18-23 digrii, 21-25 digrii xagaaga - xaaladaha noocaas ah, timirta ayaa raaxo leh. Waxay u dulqaadan kartaa dhibco heerkulka gaaban (ilaa 15 ° C).
Ma taqaanaa? Xilliga cimiladu aad u kululaato, geedku cagaaran wuxuu ku koraa oo keliya habeenkii, iyo inta lagu jiro maalinta oo dhan.
Sida dhammaan dhirta kulaylaha, chrysalidocarpus jecel yahay hawada qoyan. Waxay ka caawisaa in lagu hayo qoyaanka guriga, kaas oo la samaynayo 2-3 maalmood oo kasta. Dhirta qaangaarka ah, waxaad isticmaali kartaa qubeyska. Ka dib kiniiniga ama qubays kasta, ka saar biyaha biyaha haray ee caleemaha.
Si aan loo qalajin caleemaha oo aan luminin laaluushkooda, waa in timirta laga saaraa qalabka kuleylka. Hawada cusub waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa warshadan.
Waraabinta habboon oo joogto ah waa xaalad muhiim u ah daryeelka guriga ee chrysalidocarpus.
Waa muhiim! Sababtoo ah dareenka sare ee chrysolidocarpus ee nadiifinta biyaha iyo chlorine, biyaha waa in lagu waraabiyaa biyo iyadoo la isticmaalayo filter ama la dejiyo 24 saacadood.
Inta jeer ee la waraabiyo waxay ku xiran tahay baahida geedaha timirta, cufnaanta iyo sifooyinka ciidda, qoyaanka hawada iyo waxyaabo kale.
Chrysalidocarpus waa in la waraabiyaa kadib markii la qalajiyey dhawr maalmood. Waxaa lagugula talinayaa inaadan hoos u dhacin isla marxaladaha. Ka dib 2-2.5 saacadood, waxaad u baahan tahay inaad biyaha ka saarto digsiga - dhirta ma jecla biyaha taagan ee dheriga. Haddii biyuhu aanay tagin, waxaad u baahan tahay inaad nadiifiso dheecaan.
Inta jeer ee la waraabiyo waxay ku xiran tahay xilliga xiga - marar badan waxaad u baahan tahay inaad gasho guga iyo xagaaga. Waxay faa'iido u tahay waraabinta waraabinta iyadoo la buufinayo.
Chrysalidocarpus waxaa la bacrimiyaa Bacriminta macdanta hal mar ama laba jeer bishii. Laga bilaabo guga ilaa dayrta hore. Marmar dhadhamiyey jiilaalka. Marka lagu daro dukaamada diyaarka ah ee loogu talagalay dhirta timirta ah, dheeraadka macdanta ee caalamiga ah ayaa sidoo kale ku habboon, qiyaasta taas oo loo baahan yahay in loo isticmaalo 10 jeer ka yar inta lagu tilmaamay ee xirmadan.
Wixii chrysalidocarpus ah, isku dar ah ciidda 2 qaybood oo ah dhulka dhoobada-soddaha, 2 qaybood oo ah humus caleen, 1 qayb oo digada aad u bislaaday, 1 qayb ka mid ah peat, 1 qayb oo ciid ah ayaa wanaagsan. Waxaad ku dari kartaa dhuxul yar oo carrada ah. Xayawaanka geedaha timirta ayaa sidoo kale ku haboon.
Transplants ayaa loo baahan yahay 1 jeer 2-3 sano. Ka hor inta aadan ku tallaalin, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso substrate, dherer sare oo qoto dheer ee size ku haboon, si aanay u waxyeeleeyaan xididada dheer iyo dheecaan. Marka hore, lakabka dheecaan ayaa la dhigayaa xagga hoose ee dheriga. Ka dibna dheriga ka buuxi ciidda.
Wixii geedaha waaweyn, halkii transplanting, waxay badalaan lakabka sarre ee dhulka.
Chrysalidocarpus waxaa lagu faafiyaa sprouts iyo abuurka. Sprouts waxay isticmaashaa kuwa abuuray saldhigga dogobka. Beerto geed geed leh oo leh miraha ayaa xitaa ka sahlan koraan. Way ka fiican tahay inaad ku beerato shaashadda. Haddii ciidda diirimaad tahay, shuruudaha waa la buuxiyaa, ka dibna miraha ay soo baxaan maalinta 30-40aad. Seeds waxaa lagu kaydiyaa heerkul ah 18-22 digrii.
Ka hor inta aan la beeri, waxay ku qoyaan biyo +30 ° C 2-4 maalmood. Ka dib markii barareyso, miraha waxaa lagu beeray carrada peaty fudud oo lagu meeleeyay meel wanaagsan oo shid leh hawo qoyan, kaas oo heerkulka waxaa lagu hayaa gudaha 20-25 digrii. Marka caleen ugu horeysay waxaa la aasaasay 3-4 bilood, geedo waxaa loo rogaa galay dheriyo 10-12 centimeter.
Xilli kasta oo sanadka ka mid ah, timirta waa la faafin karaa qudaar ahaan. Si arrintan loo sameeyo, jeexjeexa-farcan, oo horayba u jirey xidid yar, waxaa la jaraa mindi fiiqan saldhigga geedka oo lagu beeray carrada qoyan. Waxaa fiican in la sameeyo laga bilaabo guga ilaa dayrta.
In chrysalidocarpus, cudurrada ugu caansan waa cudurada caleen - caleemaha qalajinaya, geesaha qalajinaya ama talooyin. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in aad dhirta ku sii deyso marar badan, ka fogee qalabka kuleylka, oo ku rid weel biyo ku xigta. Haddii ficiladani aysan aheyn mid wax soo saar leh, markaa waxaad u baahan tahay inaad dib u eegto qeyb ka mid ah quudinta. Cayayaanka geedaha caleemaha badanaa waxay saameysaa caarada caarada. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa natiijada hawada qallalan, taas oo lagu badali karo mashiinka. Dhirta uu ku dhaco waa in lagu buufiyaa cayayaanka, oo leh suuf si loo soo ururiyo cayayaanka muuqda. Duufaantu waxay sidoo kale la kulmi kartaa dhar geedka geed leh oo leh cirbad iyo nematode.
Qoyaanka ciidda xad dhaafka ah waxay keeni karaan caaryo iyo kallana. Xaaladdan, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad dib u eegto daryeelka dhirta, iyadoo engegtay ciidda. Dharka ugu sarreeya, dhererka carrada ee leh fluorine ama superphosphate waxay u horseedi kartaa lafdhabarka talooyinka caleemaha iyo dhimashadooda.
Sababtoo ah sunta qorraxda ee dhirta, caleemuhu waxay noqon karaan jaale ama u rogaan bunni, iyo dhibco si cad loo qeexay caleemaha. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad si deg-deg ah ugu wareejiso hooska qayb ahaan.
Caleemaha Brown sidoo kale waxay ka iman kartaa waraabin ku filan, hawo qabow, ama ka taabashada iyaga. Xitaa haddii talooyinka caleemaha noqdaan brown, oo aan caleen dhan, markaa waxaad u baahan tahay inaad u ilaaliso dhirta heerkulka qabow, hawada qalalan iyo ka taxadar qoyaanka ciidda ku filan. Caleemaha Brown ee lakabka hoose waa geedi socodka dabiiciga ah ee geedka, waxay u baahan yihiin in la gooyo. Laakiin haddii geedka oo dhan madow - tani waa calaamad ah ee wasaqda ciidda leh caaryar. Iftiin badani waxay sababi kartaa caleemo dhoobo iyo cayayaanka si ay u muuqdaan iyaga. Tani waxay u baahan tahay tallaabooyinka noocaas ah sida sunta sunta.
Cabbitaanka boodhka ee ciidda, ama dhibic fiiqan heerkulka, ama waraabinta biyo adag waxay sababi kartaa caleen caleen.
Iyadoo iftiin iyo qoyaan ku filan, daryeel wanaagsan, chrysalidocarpus waxay noqon doontaa warshad raaxo leh. Guryo-beereedyo, qolal-koronto leh ilo dabiici ah oo iftiinka, jardiinooyinka jiilaalka, meelaha banaan, hoolalka waaweyn, oo uu si fiican u qurxin doono, isaga oo ku haboon isaga.